50 – 99 အေဒီ – 2ငါးကို
50 – 99 အေဒီ
မူလစာမျက်နှာ / Church ကို / ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အချိန်မျဉ်းတစ်ကြောင်း / 50 – 99 အေဒီ
50 - ကောင်းကင်သို့မာရိ၏ Assumption (Apoc. 12:1, 5-6, 14)
51 – 53 - ပေါလုရဲ့ဒုတိယအသာသနာပြုခရီး (တမန်တော်ဝတ္ထု 15:36)
53 - အန္တိအုတ်မြို့၌ပေတရုနှင့်ပေါလုကိုတွေ့ကြံ
ရှင်ပေါလုဂျူးခရစ်ယာန်များ၏ရှေ့မှောက်တွင်ပြောင်းပေးလူမျိုးခြားနှင့်အတူစားပွဲ၌ထိုင်လျက်ကိုရှောင်ရှားဘို့သူ့ကို chastises (ဂလာတိမှပေါလု၏ပေးစာ, 2:11):
"အထက်လူကြီးနှိမျခွငျးအားဖွငျ့ reprehended ခံရဖို့ငြင်းဆန်မနေသင့်ကြောင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအားဖြင့်, သူသည်သမ္မာတရား၏ကာကွယ်ရေးနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်နှင့်သွန်သင်အဖြစ် Saint Peter စိန့်ပေါလု၏ထက်ပိုပြီးရှားပါးခြင်းနှင့်သီးအခြားဥပမာတစ်ခုသားစဉ်မြေးဆက်ပေးခဲ့တယ်, နှိမျ "ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲအထက်လူကြီးခုခံတွန်းလှန်ဖို့ Audacity ရှိစေခြင်းငှါ (သြဂတ်, 405 A.D., ဂျရုမ်းမှဩဝါဒစာ 22).
54 - ဧကရာဇ်ကလောဒီးယပ်ကွယ်လွန်
54 – 58 - ပေါလုရဲ့တတိယသာသနာပြုခရီးစဉ် (တမန်တော်ဝတ္ထု 18:23)
55 - ပတေရုသဖွယ်ရှိအဲဒီမှာယုံကြည်ခြင်းတရားအသိုင်းအဝိုင်းပြန်ဆောက်ဖို့ရောမမြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိ
58 - ပေါလုသညျကောရိနသုကနေရောမသည်သူ၏ပေးစာ composes
သူကသေးရောမမြို့သွားရောက်ခဲ့ပြီးမထားပါဘူးအဘယျကွောငျ့ပေးစာမှာတော့သူကရှင်းပြသည်, ခရစျတျောပြီးသားအမည်ရှိထားပြီးဘယ်မှာ "သွားရောက်ချီတုံချတုံဖြစ်ခြင်း, "ငါသည်အခြားလူသားရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်မည်ကို စိုးရိမ်. (15:20). ထုံးတမျးစဉျလာအရ, ဒီ "အခြားသူ" ပတေရုခဲ့သည်. ဒါကစောစောဘုရားကျောင်းအဘတို့၏အရေးအသားများအတွက် substantiated ဖြစ်ပါတယ်.
61 – 63 - ပေါလုရဲ့ပထမဦးစွာရောမထောင်ချ: ဧဖက်မှပေးစာ composes, ဖိလိပ္ပိ, ကောလောသဲ, နှင့်ဖိလမေုနျ
မာကုသည်ပေါလုနှင့်အတူကြောင်း, အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ်၏နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွင်းမှာ, ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အဖြစ်ကောင်းစွာမွို့၌ပေတရု၏ရှေ့တော်မှောက်ကိုညွှန်ပြ, မိမိအဘယ်မှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုရှောင်ရှားရန်လျှို့ဝှက်ထားကြပြီမယ်လို့သော်လည်း.
63 - ပတေရုသညျရောမမွို့မှသူ၏ပထမဦးစွာပေးစာ composes
သူ codeword အသုံးပြုခြင်းဖြင့် "ဗာဗုလုန်မြို့" မွို့၌မိမိအထံဖုံးကွယ်ထား: "သူမဟာဗာဗုလုန်မြို့၌အဘယ်သူသည် [တနည်း,, ရောမအသင်းတော်], အဘယ်သူသည်ထိုနည်းတူရွေးကောက်တော်မူသည်ကို, သငျသညျနှုတ်ဆက်; ဒါငါ့သားမာကု "မ (1 ချစ်. ကစား. 5:13; cf. Apoc. 17:5; 18:2).
63 - ရှင်ပေါလုကရေတေကျွန်းအရှေ့ဘက်စိတိတုဆရာတော်ကိုသန့်ရှင်းစေ
64 – 67 - ဧကရာဇ်နီရိုရောမမဟာမီးသတ်ဘို့ခရစ်ယာန်တွေကိုအပြစ်တင်; အများကြီးအသက်ပေးသွားတဲ့ကြသည်
65 - ပေါလုကိုဧဖက်စိတိမောသေဆရာတော်ကိုသန့်ရှင်းစေ
67 - ပေါလုရဲ့ဒုတိယအရောမထောင်ချ: တိမောသေဖို့ဒုတိယအပေးစာ composes
သူကစိန့် Linus ဖျောပွထားသ (4:21), ရောမမြို့ရဲ့ဆရာတော်အဖြစ်ပတေရုသသူကိုအောင်မြင်မယ်လို့. သူသည်ရောမမှယူဆောင်ခံရဖို့, Mark တောင်းဆို, "တစ်ဦးတည်းလုသည်ငါနှင့်အတူ" ဟုဖျောပွ (2 တိ. 4:11). ဒါကကြေညာချက်သေချာပေါက်ဒီတစ်ကြိမ်မှာမြို့ကနေပေတရု၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့် ပတ်သက်. ဘာမှသို့မဟုတ်မရှိခြင်းသက်သေပြမထားဘူး. ရှင်ပေါလုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သူတစ်ဦးတည်းသာသူနှင့်အတူရှိပြီးအဖြစ်အခြားလက်ထောက်အထံတော်သို့စေလွှတ်လိမ့်တောင်းဆိုနေသည်.
67 - ရောမမွို့ရှိသူတော်စင်ပေတရုနှင့်ပေါလု၏အာဇာနည်
ပတေရုသလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားသော (cf. ယောဟန်သည် 21:18-19) ဗာတီကန်ဟေးလ်အပေါ် Caligula ၏ဆပ်ကပ်ထဲမှာထောက်-Down. ရှင်ပေါလုခေါင်းဖြတ်သတ်ခံခဲ့ရ (cf.2တိ. 4:6-8) တမြို့လုံး၏နံရံအပြင်ဘက်. ဒီအတည်ပြု, Caius န်းကျင်ရေးသားခဲ့သည်ရောမ presbyter 200 A.D.: "ငါသည်တမန်တော်များ၏ဆုဖလားထောက်ပြနိုင်ပါတယ်. သင်ဗာတီကန်မှဒါမှမဟုတ် Ostian Way ကိုသှားဖို့လိုလိုလားလားရှိလျှင်, သင်ဤဘုရားကျောင်းကိုတည်ထောင်သူမြား၏ဆုဖလားကိုတွေ့လိမ့်မည် " (Proclus နှင့်အတူဆွေးနွေးငြင်းခုံ; ယူစီးဘီးယပ်, အသင်းတော်များ၏သမိုင်း 2:25:7). အဆိုပါ Muratorian တစ်ပိုင်းတစ်စ (က c. 170 A.D.) သူကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမျက်မြင်ရသောသူတို့သာဖြစ်ရပ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ဖို့ရွေးချယ်သောကွောငျ့လုကာတမန်တော်ထံမှ "ပေတရု၏စိတ်အားထက်သန်မှု omits" အဲဒီကရှင်းပြသည်.
67 - စိန့် Linus ရောမဆရာတော်အဖြစ်ပတေရုသအောင်မြင် (တနည်း,, ပုပ်ရဟန်းမင်း)
70 - အထွေထွေတိတုအားဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့၌ဗိမာန်တော်၏အဗဒ္ဒုန် (cf. Matt. 24:1-2)
70 – 150 - ထို Didache ၏ရေးစပ်သီကုံးမှု
ဘုရားကျောင်းကို manual ဗတ္တိဇံအပေါ်ညွှန်ကြားချက်ပေးသည် (နှစ်မြှုပ်ခြင်းအားဖြင့်သို့မဟုတ်လောင်း), ပှဲတျောအအနစ်နာခံကိုရည်ညွှန်းသည်, နှင့်ဓတေားနှင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတားမြစ်ထား: “သငျသညျမတရားသောမေထုန်ကိုမကျူးလွန်ရကြလိမ့်မည်. … သငျသညျဆေးကိုမသုံးကြမည် [pharmakeia, တနည်း,, ပါးစပ် contraceptives]. သငျသညျကိုယ်ဝန်ဖျက်ချရယူဖို့ရမည်မဟုတ်, မဟုတ်သလိုအသစ်တခုဖွားကလေးကဖကျြဆီးခွငျး. … ဗတ္တိဇံ-ဗတ္တိဇံအရှင်ဖို့ကိစ်စတှငျ: အထက်ပါညွှန်ကြားချက်များကိုပြီးနောက်: ခမညျးတျော၏နာမ၌ဗတ္တိဇံ, နှင့်သားတော်ကို၏, နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ (Matt. 28:19), အသကျရှငျရေထဲမှာ [တနည်း,, တစ်ဦးစီးဆင်းနေသောစမ်းချောင်း]. သငျသညျအဘယ်သူမျှမလူနေမှုရေရှိပါက, ထို့နောက်အခြားအကိုရေ၌ဗတ္တိဇံ; သငျတို့သချမ်းသောကာလ၌မတတျနိုငျလျှင်, ထို့နောက်ပူနွေးအတွက်. သငျသညျလညျးမရှိပါက, ခေါင်းပေါ်မှာရေသုံးကြိမ်လောင်း, ခမညျးတျော၏နာမ၌, နှင့်သားတော်ကို၏, နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏. … သခင်ဘုရား၏နေ့တွင်စည်းဝေး [တနည်း,, တနင်္ဂနွေ] (cf. တမန်တော်ဝတ္ထု 20:7), မုန့်ကိုချိုးဖျက်နှင့်ပှဲတျောအပူဇော်; ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့အမှား၏ဝန်ခံစေ, သင့်ရဲ့ယဇျပူဇျောစင်ကြယ်သောတဦးတည်းဖြစ်အံ့သောငှါဒါ” (2, 7, 14).
95 - စိန့်ဂျွန်ကသူ့ပေါကလစ် composes, သမ်မာကမျြး၏နောက်ဆုံးစာအုပ်, မုကြှနျးအပေါ်ပြည်ပရောက်
96 - ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးစိန့် Clement ငါ, တမန်တော်ပေတရုနှင့်ပေါလု၏တပည့်, ကောရိနသုထဲတွင်ခရစျယာရေးသားခဲ့သည်
သူကဘုရားကျောင်းအဆင့်ဆင့်မှနာခံမှုဆက်လက်တည်ရှိစေခြင်းငှါဤသို့သတိပေး, ကမျြးစာ၏လှုံ့ဆော်မှုအကြောင်းကိုရေးသားခြင်း, အဆိုပါပှဲတျောအအနစ်နာခံ, နှင့်ဓမ္မယဇ်ပုရောဟိတ်. ထို့အပြင်သူသည်ရောမအသင်းတော်များ၏အခွင့်အာဏာများပြောတတ်, ကြေညာ, "မည်သူမဆိုသူ့ကိုအားဖြင့်ကဆိုပါတယ်ခဲ့ကြသောအရာစကားနားမထောင်လိုလျှင် [ဘုရားသခ] ငါတို့အားဖြင့် [ရောမအသင်းတော်], "သူတို့လွန်ကျူးခြင်း၌၎င်း, အဘယ်သူမျှမသေးငယ်တဲ့အန္တရာယ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပါဝင်လိမ့်မည်ဟုသိစေ (ကောရိန်သုဖို့ Clement ၏ပေးစာ 59:1).